Petition လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ နှုတ်ထွက်ပေးပါရန်
1930 people have signed this petition.	Add your name now!
Bo Bo0Comments
1930 people have signed. Add your voice!
ရက်စွဲ။ ။ ၂၁ရက်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၁၆ခုနှစ်။
အကြောင်းအရာ။ ။မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့ အခွင့်အရေးကော်မရှင် အဖွဲ့ ဝင်များနှုတ်ထွက်ပေး ပါရန် တောင်းဆိုခြင်း။
၁။ ကျွန်ုပ်တို့ ပြည်သူများအနေဖြင့် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် အိမ်အကူမိန်းကလေးနှစ်ဦးကို ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှု များအတွက် မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့ အခွင့်အရေးကော်မရှင်က နစ်နာကြေးပေးသည့် နည်းဖြင့် ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းခဲ့သည့် လုပ်ရပ်ကိုကန့် ကွက်ရူံ့ချသည်။
၂။ မိန်းကလေးနှစ်ဦးသည် ကိုယ်ကာယညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုများခံစားခဲ့ရပြီး၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက် ခံစား ခဲ့ရသည်။ ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၆၇၊ ၃၆၈၊ ၃၇၀၊ ၃၂၅၊ ၃၂၆ အပြင်းအထန်နာကျင်စေမှု စသည့်ရာဇသတ်ကြီးမှုများနှင့် အကျုံးဝင်သည့်အပြင် အရွယ်မရောက်သေးသည့် ကလေးများကို ကျွန်ပြုရန် ရည်ရွယ်ချက်နှင့် စီမံထိန်းသိမ်းထားခြင်း၊ လျို့ ဝှက်ထားခြင်းကြောင်း ပြစ်မှုကြီး ဖြစ်နေသကဲသို့တစ်သက်တစ်ကျွန်းထိဒဏ်ချမှတ်နိုင်၍ အာမခံနှင့် လွှတ်ပေးခွင့်မရနိုင်သည့် ကျူးလွန်မှုများ ဖြစ်သည်။
၃။ ၄င်းအပြင် လူ့ အခွင့်အရေးနှင့် ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေး၊ အလုပ်သမားအခွင့်အရေးများ ချိုးဖောက်ခံထားရသည့် ဖြစ်ရပ်များရှိနေသော်လည်းတရားဥပဒေအရအရေးယူဆောင်ရွက်ရန် စီမံမှုမရှိ ဘဲငွေကြေးအားနည်းသူများအပေါ် ငွေကြေးဖြင့် ညှိနှိုင်းမှုသာပြုလုပ်ခဲ့သည့် လူ့ အခွင့်အရေးကော်မရှင်အပေါ် ဆက်လက်၍ မယုံကြည်နိုင်တော့ပါ။
၃။ လူ့ အခွင့်အရေးကော်မရှင် အဖွဲ့ ဝင်များသည်ပြည်သူ့ များ၏ လူ့ အခွင့်အရေးရပိုင်ခွင့်များကို မကာကွယ်နိုင်သည့်အပြင် ငွေကြေးဖြင့် မသိနားမလည်သူများအပေါ် အမှုကျေအေးရန် ညှိနှိုင်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည့်အတွက် ပြည်သူများကိုတရားဝင်တောင်းပန်၍ နှုတ်ထွက်ပေးပါရန် အလေးအနက်တောင်းဆိုသည်။
အထက်ပါတောင်းဆိုစာအား ၂၀၁၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့ တွင် မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ရုံးသို့ လက်မှတ်အရေအတွက်နှင့်အတူ ပေးပို့ပါမည်။